Fanentanana sy fiarahana amin’ny mpanakanto: namaly fitia an’i Fianarantsoa i Christian Kidodo | NewsMada
Fanentanana sy fiarahana amin’ny mpanakanto: namaly fitia an’i Fianarantsoa i Christian Kidodo
14 taona nifampitaizana sy niarahana amin’ny mponin’i Fianarantsoa Andrianavalona Christian, na i Christian Kidodo eo anivon’ny Cofestik Kidodo. Nikarakara hetsika “Valim-pitia” izy ireo, ny alahady teo tao amin’ny kianjan’ny Gara any an-toerana ary nahavory vahoaka marobe. Niarahana amin’ny mpanakanto malaza izany lanonana izany. “Naneho ny fitiavana anay nandritra ny fotoana maro ny mponin’i Fianarantsoa. Tanjona ny hahatongavan’izany valim-pitia izany any amin’ny vahoaka”, hoy izy.
Nohitsin’i Christian Kidodo fa tsy misy ambadika politika ary tsy misy idiran’ny fifidianana filoham-pirenena ny hetsika natao. “Ilaina ny fifampitaizana sy ny fikolokoloana ny fiarahamonina. Mbola misy fotoana iarahana amin’ny vahoaka. Fitiavana manokana antsika izao lanonana izao”, hoy ihany izy.
Nisy ny “tombola” nahafahana nanome loka, toy ny “bicyclette VTT”, ny “télé écran LED”, ny vary ary kojakoja maro samihafa, nozaraina nandritra ny hetsika valim-pitia. Nanotrona izany koa ireo namany akaiky sy mpiara-miasa aminy, nahatonga azy ihany koa ho tonga amin’izao toerana izao.
Tsiahivina fa nianatra momba ny famoriana fiaramanidina i Christian Kidodo, saingy nahafantarana azy ny fanentanana lanonana sy ny fiaraha-miasa amin’ny artista fanta-daza.